ကိုဩဒိနိတ်: 38°42′N 9°11′W﻿ / ﻿38.700°N 9.183°W﻿ / 38.700; -9.183
República Portuguesa (ပေါ်တူဂီ)
နိုင်ငံတော် သီချင်း: A Portuguesa
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏ တည်နေရာ (အစိမ်းရင့်)
– ဥ‌ရောပတိုက် အတွင်း (အစိမ်း နှင့် မီးခိုးရင့်)
ပြည်ထောင်စု တစိတ်တပိုင်းသမ္မတစနစ် ဖွဲ့စည်းပုံ သမ္မတနိုင်ငံ
၁၁၂၈ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၄ ရက်
၁၁၃၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်
၁၆၄၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်
• ပထမ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ
၁၈၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်
၁၉၇၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၅ ရက်
• လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ
၁၉၇၆ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၅ ရက်[note ၂]
၉၂,၂၁၂ km2 (၃၅,၆၀၃ sq mi) (အဆင့်: ၁၀၉)
၁.၂ (၂၀၁၅ ခုနှစ်အရ)
• ၂၀၂၁ သန်းခေါင်စာရင်း
၁၁၂.၂/km2 (၂၉၀.၆/sq mi)
Note: ပေါ်တူဂီပြည်မနှင့် မဒီးရကျွန်းများတို့တွင့် WET/WEST ကို အသုံးပြုကြပြီး အဇော့ကျွန်းတွင် ၁ နာရီနောက်ကျသည့်အချိန်ကို အသုံးပြုသည်။
^ Mirandese language, spoken in some villages of the municipality of Miranda do Douro, was officially recognized in 1999 (Lei n.° 7/99 de 29 de Janeiro), awarding it an official right-of-use. Portuguese Sign Language is also recognized.
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ (တရားဝင် အခေါ်အားဖြင့် ပေါ်တူဂီ သမ္မတနိုင်ငံ[မှတ်စု ၁]) သည် ဥရောပ အနောက်တောင်ပိုင်း အိုင်ဘေးရီးယန်းကျွန်းဆွယ် ပေါ်တွင် တည်ရှိသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ပေါ်တူဂီသည် ဥရောပ၏ အနောက်ဘက် အကျဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အနောက်ဘက်နှင့် တောက်ဘက်တွင် အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာ၊ အရှေ့ဘက်နှင့် မြောက်ဘက်တွင် စပိန်နိုင်ငံ တို့က ဝိုင်းရံထားသည်။ အတ္တလန္တိတ် ကျွန်းစုများ ဖြစ်သော အာဇိုး နှင့် မဒရီရာ တို့သည် ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏ တစိတ်တဒေသ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများဖြစ်သည်။
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံက စုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ ၈၅% ဟာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သည်အထဲက ၈၁% ကတော့ ရိုမန်ကစ်သလစ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ ၄% ကတော့ ကျန်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေသာဖြစ်ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှ ဖော့ဆို့တွေရဲ့ တစ်ဝက်ကျော်ဟာ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်တူဂီဟာ ဖော့ဆို့တွေဖြစ်လာစေတဲ့ Cork Oak သစ်တောပေါင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖော့ဆို့တွေရဲ့ ၇၀% ဟာ ပေါ်တူဂီမှဖြစ်ပြီး ဂျာမနီ၊ ယူကေနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွေစီအဓိကတင်သွင်းပါတယ်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Reconhecimento oficial de direitos linguísticos da comunidade mirandesa (Official recognition of linguistic rights of the Mirandese community)။ 18 March 2002 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 23 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ The Euromosaic study, Mirandese in Portugal, europa.eu – European Commission website. Retrieved January 2007. Link updated December 2015
↑ (in ပေါ်တူဂီ)Superfície Que municípios têm maioremenor área?။ Pordata။
↑ Censos 2021 - Divulgação dos Resultados Preliminares - 2021 (28 July 2021)။
↑ PORDATA - Population density, according to Census။
↑ ၈.၀ ၈.၁ ၈.၂ ၈.၃ Report for Selected Countries and Subjects – Portugal။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (2021)။
↑ Gini coefficient။ PORDATA။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ&oldid=726862" မှ ရယူရန်
ပေါ်တူဂီဘာသာစကား ရင်းမြစ်များ ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ (pt)
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။